Corona rikicin covidna-19 bụ ihe echetara afọ 2003 MS Blaster virus nke ana - akpọ Bill Gates: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 Ka 2020	• 13 Comments
isi mmalite: crn.com
A na-anụwanye ụda dị iche iche na-ekwupụta na ọ bụrụ na e mere coronavirus n'ezie na ụlọ nyocha. Ebe a na-akpọ ndị aghụghọ chebe Nu.nl wakporo m na mbido, mgbe m mere ka amata na nje dị otu a nwere ike isi n'ụlọ nyocha pụta, ọ bụ otu mgbasa ozi na-ekwu maka nke a. Skynews Mee na Mee 24, isi okwu: "Coronavirus nwere ike ịbụ 'nnwale ọdịbendị sel' nke mehiere."
Prọfesọ Nikolai Petrovsky nke Mahadum Flinders gụchara ọmụmụ sayensị, ugbu a na-enyocha ndị ọgbọ, na mmekorita ya na Mahadum La Trobe dị na Victoria na-egosi na COVID-19 gbanwetụrụ iche maka mbufe mmadụ, karịa nke ọ bụla. Anụmanụ ọzọ, tinyere ụta. ”
Ugbua na January 28 2020Ọbụna tupu ndị mmadụ amata ihe Bill Gates bụ, m kwuru saịtị ahụ na o kwuru nkwupụta na 2017: “Ọrịa na-esote nwere ike ime na enyo kọmputa nke onye na-eyi ọha egwu nke chọrọ iji mkpụrụ ndụ ihe nketa mkpụrụ ndụ iji mee ụdị nke kịtịkpa na-arụ ọrụ."
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta sistemụ kọmputa na ụlọ obibi na ọfịs ọ bụla n'ụwa niile, ịnwere ike ịbawanye ntụgharị gị ma ọ bụrụ na ị maara otu sistemụ kọmputa ndị ahụ si arụ ọrụ. Knowmara adịghị ike nke kọmputa ahụ na ịntanetị ị nwere ike ịbanye ụdị usoro a iji mebie mmebi. Yabụ ị nwere ike zụọ nje virus na kọmputa wee nweta ego ọzọ site na ị nye ụzọ ahụ. N'ezie ị naghị eme nke ahụ n'onwe gị, n'ihi na nke ahụ ga-enwe nnukwu ike ịchọpụta. Na-eme nke a site na ụlọ ọrụ nwere nnwere onwe kpamkpam.
Mwakpo nje virus nke komputa a nke afọ kachasị njọ akpatawo azụmahịa, ụlọ ọrụ gọọmentị na ndị ọrụ ụlọ gburugburu ụwa, na-akwa ndị isi bilitere Microsoft Bill Gates na ngwanrọ Windows ya.
Ọtụtụ narị puku kọmputa agbadalarị na North America, Eshia, na Europe, ọ̀tụ̀tụ̀ ọsọ ọsọ ya ka nje virus na-amụgharị na ịntanetị, otu ọkachamara kwuru.
Ọ dọrọ aka na ntị na nje ahụ nwere "oge ịgba bọmbụ", nke ga-agbawa na Satọde.
MS Blaster na-eji ọpụpụ ngwanrọ na ọtụtụ sistemụ Windows sitere na Microsoft, na Windows 2000, Windows XP, Windows NT na Windows Server 2003 bụ ndị kachasị emetụta. (isi: smh.com.au)
isi mmalite: wikiedia.org
Nke ahụ mere na 2003 ma ọ dị mfe ịkọ onye kpughere ọtụtụ ihe na ntiwapụ nje a. John Wendell Thompson nọ n'oge ahụ onye isi oche Symantec mgbochi nje, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara mmelite nchedo nchebe ngwa ngwa 'megide virus a Bla Blaster na Ọgọstụ 11. Isnye bụ onye isi oche Microsoft ugbu a? N'aka nri, otu John Wendell Thompson.
N’ezie ekwesighi ibu onye nzuzu iji mata onye n’azụ ihe a.Nsogbu, Ngwọta Ngwọtaegwuregwu gwụrụ. A na-ahụ ya mgbe ị na-emeghe anya gị. Ihe ojoo oria komputa a nke MS Blaster n’ezie site n’usoro. Ndi mmadu azutara ihe-eji egbochi oria-virus a.
N’ihe omuma nke ahu mmadu na ozu ya nwere ihe omuma ma nke anyi ji eme ihe Teknụzụ CRISPR-CAS deghari DNA niile na ịntanetị bụ ahụ mmadụ, nke bụ kọmputa na ụlọ ọfịs na 2003. Coronavirus bụ MS Blaster virus n'oge ahụ Bill Gates ka bụ onye isi na-akwọ ụgbọala. Ego ya na-abanye na &lọ Ọrụ Bill & Melinda Gates na ụlọ ọrụ na-egbochi nje n'ụdị mmepụta ọgwụ mgbochi. Ọ bụ otu egwuregwu ahụ, naanị na ọkwa kọmputa-bio.
Kedu nke na-ewetara anyị n'ajụjụ a, "Kedụ mfe ị kwenyere ndị mmadụ site n'aka onye iro a na-adịghị ahụ anya ma ha na-anabata nha ọ bụla?" Ọ dị mma, ntiwapụ nje virus 2003 MS Blaster dị na kọmputa maka kọmputa. Ihe ntiwaputa Covid-19 bu ihe ojoo nye ndu mmadu. Oge erughi oge imeghe anya gị? Onlyzọ otu ọ ga - esi wepụta wayo a zuru ụwa ọnụ bụ dọpụta ndị scammers ma bulie nnukwu ụmụ nkịta ego na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi. Nke ahụ na-amalite site n'ụra na-aga n'ihu na otu mgbanwe nke obi, ma were ihe doro anya. Mee ihe ma bido mgbanwe ahụ ugbu a:
ochichi onye kwuo uche ya ugbua
Ihe ndekọ njikọ njikọ: skynews.com, smh.com.au, wikipedia.org
'Bill Gates' countum dots 'kaadị ID nke na-eme ka a mara ma ị nwere coronavirus ma ma ọ̀ gbara gị ọgwụ
Netflix 'oria ojoo: olee otu esi egbochi mgbasa ozi mgbasa ozi' maka ogwu zuru oke nke SuperHuman-2.0?
Ihe mkpuchi mgbochi Coronavirus covid-19 agbatịkwuru Eprel 6 ma ọ na-enwewanye ibu
Bill Gates 2017: "Ọrịa na-esote nwere ike ọfụma na enyo kọmputa"
Tags: agha, mgbochi, Bill, blaster, kọmputa, coronavirus, Covid-19, agba, Gates, John, Micorsoft, MS, MSBlaster, pc, Symantec, Thompson, ogwu, ọgwụ ịgba ọgwụ, Wendell
28 May 2020 na 11: 33
Washington Times akọpụtakwala banyere nchọpụta a, ụlọ kaadị a na-ezighi ezi na-amalite ịgwagbu ụbọchị niile. Naanị mmebi nke emebiri bụ enweghị atụ ..
28 May 2020 na 11: 40
Gates bụ nke Ndị Inntouchables ma chekwaa ya n'ọkwa dị elu site n'aka ndị a na-enyo enyo na mbụ.
Bill Gates ghọrọ onye na-akwanyere ugwu ugwu
Nke ahụ na-akọwakwa nkwado nke England zuru oke site na Pirbright Institute na hoax a.
Iyi egwu bọmbụ dere, sị:
30 May 2020 na 00: 53
Ikekwe ọ bụ naanị ihe ziri ezi na mmebi ahụ emere enweghị atụ. Ọ bụrụ na enwere ike idozi ya, anyị ga-agaghachi naanị n'ihe ndị anyị nwere. Ọ bụrụ na nke ahụ agaghị ekwe omume, mgbe ahụ anyị ga-ewu ihe ọhụrụ… ..
N’ụzọ dị mwute na, “nsogbu” a buru ibu nwere ike bụrụ ohere kachasị eme ịme ihe dị iche iche na-enweghị ikpochapụ kpamkpam.
Ma ọ ka ga-abụ otu ihe….
28 May 2020 na 13: 39
Ugbu a ha ji ọrụ n'aka ...
Otu Soros-Funded Group Kwuru na Nsogbu Covid-19 Bụ Oge Ziri Ezi Iji 'Kwụsị Ezinụlọ Ahụ'
28 May 2020 na 15: 36
Ya niile na-aga dị ka edemede
Nnukwu ụlọ ọrụ ọgwụ mgbochi WHISTLEBLOWER kwuru na ọgwụ ọhụrụ RNA #COVID ụlọ ọrụ ya na-etolite nwere ike ibute STARILITY n'ime ụmụ nwanyị 97%, ga-agbanwekwa DNA nke 100% nke ndị natara ya.
28 May 2020 na 15: 39
28 May 2020 na 16: 59
Ndị na-ahụ maka nde Billionaire na-anwa ịbelata onu ogugu ụwa
Site n'aka Robert Frank
Mee 26, 2009 11:57 am Et
Oxel dere, sị:
29 May 2020 na 09: 00
@Analyze: enwere ike ịchọta vidiyo a ebe ọzọ?
29 May 2020 na 16: 37
laghachi na ya Zed Phoenix dị ka Buttar, Mikovits, Kaufman bụ onye a na-enyo enyo na mbụ ma na-akwado ya site na Icke, Jones, network Allen.
28 May 2020 na 15: 49
N'oge gara aga, ndị Celts, Anglo-Saxons chịrị ezigbo England n'oge gboo. Ugbu a ị nwere 'elite' ọzọ
onye were aha Englishlọ Bekee ndị mejupụtara ya na ihe ndị mebiri emebi were weghara ebe ahụ. Na-ahụ nke a n'ụwa niile, na kwabatara 'elite'.
30 May 2020 na 06: 40
N'aka nri, "ochie nkịtị" nke onye kwuo uche onye kwuo uche etinyela anyị n'ọnọdụ a, yabụ, ọ bụ oge maka ọhụụ. Ihe ohuru a, ya mere, anaghi achipu ya dika ndi ochichi ugbu a, kama obu usoro ochichi dika iwu ochichi onye kwuo uche ya di. Ya mere oge http://www.fvvd.nl ma gaa leta ma bịanye aka na akwụkwọ mkpesa
30 May 2020 na 12: 22
Ee ‘anyị’ kwesịrị ikele ‘ndị dibia’ anyị maka ọrụ ‘ọma’.
Ndị mmadụ bịanye aka na arịrịọ ahụ, UGBU.
30 May 2020 na 18: 41
Ma ebe a na ozi ọma na-akpata ọgba aghara site na ndị na-enyo enyo na mbụ. Sir George Floyd na popon a masonic. Eleghị anya ọ maara onye uwe ojii ahụ, n'ihi na ha mere nchekwa ọnụ. Ọfụfụ ụgha dị ka o yiri, fim ole na ole na-egosi ya n'ụzọ ezi uche dị na ya. N'ime ndị ọzọ 33zọ XNUMXrd na agba wdg.
" Ike nke mgbanwe na-amalite site na mkpo nke egwu, mmemme na echiche ụgha ma tụgharịa bụrụ ezigbo mgbanwe
Ndị uwe ojii ogbugbu mmadụ na Minneapolis George Floyd iji wepụta agha obodo? »
Nleta ha: 4.167.132